देउवा र प्रचण्ड को भेटबार्ता सकियो, के के भयो छलफलमा ? – Palika Times
देउवा र प्रचण्ड को भेटबार्ता सकियो, के के भयो छलफलमा ?
२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच संवाद भएको छ । बूढानीलकण्ठ स्रोतका अनुसार सोमबार साँझ काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच करिब २० मिनेट टेलिफोन संवाद भएको थियो । सोमबार काँग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि देउवा–प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम भए पनि काँग्रेस बैठक स्थगित भएपछि अपरान्ह टेलिफोनबाटै संवाद भएको हो ।
स्रोतले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि हामीले जोड दिँदा पनि तपाईंले अविश्वास र आशंका मात्र गर्नुभयो, अब केपी ओलीजी आफैं विश्वासको मत दिनु तम्सिनुभयो । अब हाम्रो रणनीति के हुन्छ ?’
निषेधाज्ञामा नेपाल टेलिकमको प्याक अफर